Vitalik Buterin vs. Elon Musk; inodzokorora kusakwanisika scalability yeDOGE
Vitalik Buterin akasimbisa matambudziko ehunyanzvi mukukwanisa kweDOGE mubvunzurudzo.
Buterin aburitsa pachena kuti anoda DOGE uye kuti ndiye muridzi we "boka" re cryptocurrency.
Ethereum co-muvambi Vitalik Buterin nguva pfupi yadarika akataura nezve DOGE uye Elon Musk chimiro che cryptocurrency panguva yepodcast naLex Fridman. Iyo bvunzurudzo inokurukura maMusk mazhinji maTweets nezve DOGE uye kugona kwayo. Fridman akataura zvaMusk chirevo icho "Zvakanakisa, Doge inomhanyisa nguva yenguva ne10X, inowedzera saizi yemablock ne10X, uye inobvisa fizi ne100X." Ipapo anobva akunda maoko pasi. "
Vitalik Buterin inotaura nezve scalability yeDOGE
Kutaura pamubvunzo wekukanganisika kweDOGE, Buterin akanongedza kunze kwekuti mhando yekusagadzikana Musk inoda yeDOGE inogona kutungamira kune centralization, iye nekupokana nehutongi hwehutongi hwehunyanzviblockchain ology.
Fridman akataura nezve bhurogi post kubva kuButerin kwaaka kupikisa chirevo chaMusk, kutaura kuti izvi hazvigoneke zvichibva pane zvekushandisa zvinhu Mubvunzurudzo akapfuurira mberi nekubvunza Buterin nezve zvipingamupinyi zvehunyanzvi zvinodzivirira Dogecoin kubva "pakuva imwe yenyika inotungamira yemari." Pamusoro pezvo, Fridman akabvunza Buterin kana achitya DOGE, sekuisa kwaMusk mu tweet .
Mukupindura, mubatanidzwa weEthereum akati aisatya DOGE. Akawedzera kuti aifarira DOGE, achireva iyo imbwa ine zita rimwe chete, DOGE. Sekureva kwaButerin, Dogecoin inoshandiswa kubhadhara pamisangano yegore negore yeDevCon. Akati anotenda kuti Ethereum haapikise Dogecoin. Buterin akazivisa kuda kwake DOGE, uye akaburitsa pachena kuti ane rake "boka" remari.
Musk simba pane macryptocurrencies
InPamusoro pezvo, Fridman akataura kuti Musk angakanganisa sei kuvandudzwa kwema cryptocurrencies. Sezvineiwo, CEO weTesla akawedzera zviwanikwa uye kurasikirwa kweakakosha madhijitari nekufamba kwenguva. Bitcoin's ichangoburwa kudonhedza zvisungo muMusk inotsoropodza hurukuro pamusoro peBTC simba rekushandisa.
Uyezve, Buterin akati zvingave "zvinoshamisa" kuva neDOGE yakachengeteka bhiriji kuenda kuEthereum. Anobvunzurudza akabatawo kufarira kwaMusk muBitcoin asati achinja kuenda kuDOGE. Musk aive mumiriri weBitcoin uyo pane imwe nguva akawedzera hashtag Bitcoin kune yake Twitter biography. MunaFebruary, Tesla akaburitsa mufaira pamwe neSecurities and Exchange Commission kuti kambani yeEV yakanga yatenga Bitcoin pamadhora mabhiriyoni 1.5. Iyo automaker yati zvakare ichatanga kugamuchira Bitcoin senzira yekubhadhara.
Zvisinei, Musk akazivisa kuti Tesla haachagamuchiri BTC, achitsanangura pkunetseka kwezvakatipoteredza. Musk akatsigira DOGE, uye Fridman anotenda kuti Tesla angafunga nezvekuwana iyo cryptocurrency. Mubvunzurudzo akabvunza Buterin kana mugadziri akafunga kuti SpaceX inogona kufunga nezveETH kutanga mu crypto space. Buterin inotarisira kuti Tesla uye SpaceX vangangofanira kufunga nezveETH rimwe zuva.
Fridman anoenderera mberi akataura pane zvakafanana pakati peCardano uye Ethereum mapurojekiti. Cardano inotungamirwa naCharles Hoskinson, mumwe wevakabatana-veEthereum. Zvinotora mukana wekupupura-kwe-danda kubvumirana senge Ethereum network. Mubvunzurudzo akabvunza kana Buterin achiona Cardano semukwikwidzi kana tekinoroji yekuwedzera.
Musi wa3 Chivabvu, Forbes akazivisa Buterin semudiki wepasirose bhiridha. Panguva yechiziviso, iye 27-gore-okuberekwa mugadziri aive ne333,520 ETH inokosha $ 1.09 bhiriyoni pamutengo weETH wemadhora mazana matatu nemazana matatu nemakumi maviri nesere.